လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း MUJIGAE ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း MUJIGAE ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
September 11, 2009 — mmweather
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်မှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ Tropical Depression 14W (MUJIGAE) ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ နာရီအတွင်း ဟိုင်နန်ကျွန်းပေါ်က ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပုံမှာ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီကို ၂၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခံရနိုင်တဲ့ ဟိုင်နန်ကျွန်းနဲ့ တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသ(ဂွမ်ဒုံးပြည်နယ်) နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒေသတစ်ချို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်လာခြင်းမရှိတာကြောင့် အထက်မှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ဒေသများအတွက် သက်သာရာရသွားတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၈းဝဝ နာရီဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံမှာ ဗီယက်နမ် ပင်လယ်ကွေ့ပေါ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ MUJIGAE ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းရဲ့ အရှိန်ကြောင့် အဲဒီဒေသတွေမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေမှာကတော့ အသေအချာပါဘဲ၊ လာအိုနိုင်ငံပေါ်ကိုရောက်တဲ့အထိမှ အရှိန်မသေသေးရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်က စပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လာမဲ့ ၂ ရက်အတွက် မိုးစိုစိစိုစိကြားက သွားလာကြရဘွယ်ရှိကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted in Weather News. Tags: MUJIGAE, tropical-storm, weather. LeaveaComment »
« MUJIGAE လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်ပြန်လည်လျော့ကျသွားပြီ
MUJIGAE ဟိုင်နန်ကျွန်းသို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့(သတင်း) »